တရုတ်အရည်အသွေးမြင့်တင်းမာမှုပိုလီမာဆိုင်းထိန်းစနစ်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | သမိုင်း
2. ပြီးပြည့်စုံသော hydrophobic စွမ်းဆောင်ရည်၊ အိုမင်းခြင်း၊ ခြေရာခံခြင်းနှင့်တိုက်စားခြင်းများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
၃.High-strength အက်ဆစ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော FRP လှံတံသည်ပေါင်းစပ်လျှပ်ကာပစ္စည်းများ၏စိတ်ချရမှုကိုသေချာစေသည်။
4. Arcing corona လက်စွပ်သည်လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ပုဆိန်တစ်လျှောက်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကိုဖြန့်ဖြူးသည်။ Corona ဖြစ်စဉ်ကိုကာကွယ်ရန်နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းကို flashover အတွက်အဆုံးတွင်တပ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းအားအကြီးအကျယ်ပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။
5. အဆုံးတပ်ဆင်မှုနှင့် FRP လှံတံများသည်တင်သွင်းထားသောအဆုံး - အံ ၀ င်ကွေးညှပ်ညှပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းကြောင့်ထုတ်ကုန်၏စက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်။
pin ကို insulator တွင်လည်း
ပေါင်းစပ် Cross- လက်မောင်း Insulator တွင်လည်း FSW-35/100 35 100 650 450 1015 230 95
ရှေ့သို့ မြင့်မားသောကာကွယ်မှုဆီလီကွန်ရာဘာ Post Composite Insulator
မြင့်မားသောကာကွယ်မှုဆီလီကွန်ရော်ဘာ Post Composite ...
မြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ် Composite strain pin Insu ...